အမေဇုံပြုံးနေ: ကို set up နှငျ့သငျမရှိကုန်ကျစရိတ်မှာ Element ကိုမှလှူဒါန်းဖို့ကိုဘယ်လို!
အမေဇုံအပြုံးကို set up လုပ်နည်း smile.amazon.co.uk
AmazonSmile ဖောက်သည်များချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုများအတွက်လှူဒါန်းမှုသူတို့အမေဇုံ (အမေဇုံအပြုံးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ) မှာစျေးဝယ်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန် generate နိုင်တယ် Amazon ရဲ့ Affiliate စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားအလှူငွေသေးငယ်တဲ့ပုံပေါက်ပေမဲ့သူတို့မျှော်လင့်ချက်ထည့်ပါ။ ရုံ£ 25 Element ကိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားနေရပြီးလူငယျတစျယောကျအတှကျကြှနျုပျတို့၏အစီအစဉ်များကိုတဦးရန် bursary ပူဇော်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ဖောက်သည်မှာစျေးဝယ် smile.amazon.co.uk အမေဇုံအရည်အချင်းပြည့်မီထုတ်ကုန်သန်းပေါင်းများစွာတို့အတွက်ပိုက်ကွန်ဝယ်ယူစျေးနှုန်းတစ်ရာခိုင်နှုန်းလှူဒါန်းပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်သို့မဟုတ်တာဝန်ခံဖောက်သည်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မေတ္တာရှိပါသည်!
စျေးဝယ်မစတင်မီ Element ကို Society ကရွေးချယ်ဖို့သတိရပါ!
1 ။ AmazonSmile မှာ Element ကို Society ကတွေ့ရှိရန်ဒီ link ကိုလိုက်နာပါ https://smile.amazon.co.uk/gp/chpf/homepage/ref=smi_se_scyc_srch_stsr?q=element+society
2 ။ Select လုပ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
3 ။ အားလုံးပြီးပြီ!
Element ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်း၏လုပျငနျးကိုထောကျပံ့ဖို့တခြားနည်းလမ်းများအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာရန် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။